၏လမ်းလျှောက် | ခရီးသွားသတင်း
မာရီယာ | | အမေရိကန်, ကြည့်ဖို့ဘာလဲ
ရုပ်ရှင်ပရိသတ်အားလုံး၏အိပ်မက်မှာ Los Angeles သို့ Los Angeles သို့သွားရန်ဖြစ်ပြီး City of Stars ၏ထောင့်အားလုံး၊ ရုပ်ရှင်နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားများတွင်အကြိမ်ပေါင်းများစွာမြင်တွေ့ခဲ့ရသောနေရာများနှင့်အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်ရုံအချို့ကိုရိုက်ကူးခဲ့သောနေရာများသို့သွားရန်ဖြစ်သည်။
လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်တွင်တွေ့ရမည့်ဤဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုမှာ Walk of Fame ဖြစ်ပြီးကမ္ဘာပေါ်တွင်လူကြိုက်အများဆုံးလမ်းဘေးဖြစ်သည်။ ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်း၏အကြီးမားဆုံးအမည်များကိုရည်စူးထားသောကြယ် ၂,၅၀၀ ကျော်ဖြင့်နှစ်စဉ်ထောင်နှင့်ချီသောလူတို့သည်မိမိတို့၏အကြိုက်ဆုံးအနုပညာရှင်များ၏အမည်ကိုရှာဖွေရန်၊ ထိုတွင်မရှိသေးသောသူများအားဂုဏ်ပြုရန်နှင့်ထိုကဲ့သို့သောနေရာတွင်အမှတ်တရလက်ဆောင်ဓာတ်ပုံရိုက်ရန်အတွက်၎င်းကိုနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းလာရောက်လည်ပတ်သည်။ ဒီတစ်ခုလိုအထင်ကြီးစရာကောင်းတယ်။
ဟောလိဝုဒ်လမ်းလျှောက်မှုဖန်တီးသောအခါသင်သိပါသလော။ ဒီမိုparticular်းမျက်နှာကြက်၌အဘယ်သူသည်ပထမကြယ်ပွင့်တယ်? မည်သည့်အမျိုးအစားတွင်ကြယ်အများဆုံးနှင့်အနည်းဆုံးရှိသောကြယ်အမျိုးအစားရှိသနည်း။ ထို့နောက်ငါလမ်းလျှောက်ခြင်း၏လမ်းလျှောက်မှု၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုထုတ်ဖေါ်။
1 Fame ၏လမ်းလျှောက်ခြင်း၏မူလအစ
2 Walk of Fame တွင်ပထမဆုံးကြယ်ပွင့်ကဘာလဲ။
3 Fame ၏လမ်းလျှောက်မှုကျဆင်းခြင်း
4 Walk of Fame ၏အကျော်ကြားဆုံးလမ်းပိုင်းကဘာလဲ။
9 ပထမ ဦး ဆုံးကာတွန်းဇာတ်ကောင်ကိုလက်ခံရမလား။
ဟောလိဝုဒ်တွင်ဤအထိမ်းအမှတ်အဆောက်အအုံကိုဖန်တီးရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ခြင်း၏အကြောင်းရင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သီအိုရီနှစ်ခုရှိသည်။ ပထမ ဦး ဆုံး ၁၉၅၃ ခုနှစ်က Los Angeles ကုန်သည်ကြီးများအသင်းဥက္ကpresident္ဌ EM Stuart သည် Hollywood ဟိုတယ်စားသောက်ဆိုင်၏အလှဆင်ခြင်းဖြင့်မှုတ်သွင်းထားသောရုပ်ရှင်ရုံလောကကိုဂုဏ်တင်ချင်သောအချိန်တွင်စတင်ခဲ့သည်။ အဘယ်သူ၏မျက်နှာကျက်မှအနုပညာရှင်များ၏အမည်နှင့်ကြယ်များကိုချိတ်ထားသည်။ ။
ဒုတိယကကျွန်တော်တို့ကို ၁၉၅၈ ခုနှစ်မှာဟောလိဝုဒ်ကမြို့ရဲ့ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းလုပ်ငန်းမှာကူညီဖို့နဲ့ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်တွေနဲ့အန်ဂျလင်နော့စ်တွေအတွက်ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိအောင်အနုပညာရှင် Oliver Weismuller ကိုငှားရမ်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်။ ဟောလိဝုဒ်လမ်းလျှောက်ခြင်း၏ကျော်ကြားလှသည့်လမ်းလျှောက်မှုကိုဖန်တီးရန်ဆိုသည်မှာမင်းသမီး Constance Talmadge သည်သူမအသစ်ခင်းထားသောonရိယာကိုမှားယွင်းစွာလိုက်လံရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်သူမအမဲလိုက်ခြင်းကိုမြေပြင်ပေါ်တွင်စွန့်ခွာခဲ့သည့်အမှားသေးငယ်မှုကြောင့်မှုတ်သွင်းခံခဲ့ရသည်။ ဒါကြောင့်အစဉ်အလာစတင်ခဲ့သည်!
Walk of Fame တွင်ပထမဆုံးကြယ်ပွင့်ကဘာလဲ။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ၁၉၅၀ ပြည့်လွန်နှစ်များ မှစ၍ ကြယ် ၂၀၀၀ ကျော်ကိုမြေပြင်ပေါ်တွင်သိုလှောင်ထားခဲ့ပြီး ၁၉၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအလယ်လောက်တွင် Walk of Fame ကိုတိုးချဲ့ရန်လိုအပ်သည်၊ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်သေးငယ်လွန်းသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့် ၁၉၆၀ ပြည့်နှစ်မှာပထမဆုံးမင်းသမီးကြယ်ပွင့်မင်းသမီး Joanne Woodward ကိုချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်
၁၉၆၀ နှင့် ၁၉၆၈ ခုနှစ်အကြားရှိပတ်ဝန်းကျင်၏ယိုယွင်းပျက်စီးမှုကြောင့် Walk of Fame လမ်းလျှောက်ခြင်းကိုလျစ်လျူရှု။ ကြယ်အသစ်များထပ်မံထည့်သွင်းခြင်းမပြုခဲ့ပါ။ သို့သော်ပြန်လည်ထူထောင်ပြီးနောက်၎င်းသည်အသစ်သောလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုပေးခဲ့ပြီး၎င်းသည်ကျော်ကြားမှုကိုပြန်လည်ရရှိရန်ကြယ်တစ်လုံးစီ၏ဖွင့်ပွဲကိုဂုဏ်ပြုအခမ်းအနားနှင့်အတူလိုက်ပါခဲ့သည်။
ပုံရိပ် Owen Lloyd ဝီကီပီးဒီးယား
Walk of Fame ၏အကျော်ကြားဆုံးလမ်းပိုင်းကဘာလဲ။
Vine Street တွင်တပ်ဆင်ထားသောကြယ်များစွာလည်းရှိသော်လည်း၎င်းတို့အများစုသည်သိပ်သည်းသော Hollywood Boulevard ဖြစ်သည်။
ဆုရရှိသူများသည် Walk of Fame ၏ကြယ်များကိုထိန်းသိမ်းရန်ဂရုပြုရမည်။ ဒီနေ့ဒေါ်လာ ၃၀,၀၀၀ ၀ န်းကျင်ရှိသည်။ စျေးနှုန်းကလူအများအား၎င်းတို့၏ကြယ်ပွင့်မရှိခြင်းကိုတားဆီးနိုင်သော်လည်းအမှန်တရားမှာ၎င်းသည်အနုပညာရှင်များကြားတွင်အလွန်လူကြိုက်များသည့် Boulevard ဖြစ်သည်၊ တစ်နှစ်လျှင်အဆိုပြုသူ ၂၀၀ ခန့်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့ပြီးကျယ်ပြန့်သောစာရင်းထဲသို့ဇာတ်ကောင်အသစ်များထည့်ရန်ဖြစ်သည်။ ခန့်မှန်းခြေ ၁၀% သာရွေးချယ်သည်။
ဂုဏ်ပြုသူများကိုရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ တခါတရံဖြစ်ပွားခဲ့သောအငြင်းပွားဖွယ်ရာများကြောင့်လက်ရှိအချိန်တွင်လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်တွင်ကြယ်ပွင့်ရှိသူများကိုရွေးချယ်သူ ၅ ယောက်ခွဲခြားထားသောကော်မတီတစ်ခုရှိသည်။
ကင်မရာ - ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းအတွက်ပံ့ပိုးမှု။
ရုပ်မြင်သံကြား - ရုပ်မြင်သံကြားလောကအတွက်ပံ့ပိုးမှု။
မိုက်ခရိုဖုန်း - ရေဒီယိုကမ္ဘာသို့ပံ့ပိုးသည်။
ယခုအချိန်အထိ Walk of Fame မှကြယ် ၄၇ ရာခိုင်နှုန်းသည်ရုပ်ရှင်အမျိုးအစားတွင်ပါဝင်ကြပြီး ၂% အောက်သာလျှင်ပြဇာတ်ရုံလုပ်ငန်းတွင်ပါဝင်ခြင်းကြောင့်ချီးမြှင့်ခံရသည်။
အဲဒီလိုပဲ။ ရုပ်ရှင်ရုံအမျိုးအစားတွင် Antonio Banderas၊ Javier Bardem နှင့်Penélope Cruz တို့သည်စပိန်သရုပ်ဆောင်များဖြစ်ပြီး Walk of Fame တွင်သူတို့၏ကြယ်ပွင့်ရှိသည်။ ပထမ ဦး ဆုံးရသူမှာ Julio Iglesias ဖြစ်ပြီး ၁၉၈၅ တွင်ဂီတအမျိုးအစားတွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။ ဤစာရင်းတွင်ပါလစီဒိုဒိုမင်ဂိုလည်းပါဝင်သည်။
ပထမ ဦး ဆုံးကာတွန်းဇာတ်ကောင်ကိုလက်ခံရမလား။
ငါးဆယ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားတွင် Mickey Mouse သည် ၁၉၇၈ ခုနှစ်တွင်ပထမဆုံးကြယ်ပွင့်ရရှိခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှ စ၍ အခြားအက္ခရာများရရှိရန်အခြားဇာတ်ကောင်များမှာ Snow White၊ Bugs Bunny၊ Simpsons၊ Donald Duck, Shrek, Crazy Bird နှင့် Kermit the Frog တို့ဖြစ်သည်။
Walk of Fame တွင်ကြယ်ငါးပွင့်ရှိသည့်ထပ်ခါတလဲလဲလူတစ်ယောက်နှင့်မင်းသမီး Gene Autry သည်မယုံနိုင်လောက်အောင်အံ့သြဖွယ်ကောင်းပုံရသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » အမေရိကတိုက် » အမေရိကန် » ဂုဏ်ပြုခြင်းခံရသူများကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသောအဆောက်အဦး